JLPT ကိုအထူးပြုသည့် ideal course ကို online မှာ ပြုလုပ်ချင်တယ်! | Su See Yar
ပင်မစာမျက်နှာ / JLPT ကိုအထူးပြုသည့် ideal course ကို online မှာ ပြုလုပ်ချင်တယ်!
JAFUN = JAPANESE (ဂျပန်) X FUN (ပျော်စရာ)
JAFUN ဆိုတာကတော့ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကို အင်တာနက်ကနေ Facebook ကို အသုံးပြုပြီး ဂျပန်စာသင်ကြားပေးမယ့် ဂျပန်ဘာသာသင်ကြားရေး Platform တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသတို့မှ မြန်မာလူမျိုးများအားလုံးကို အကျိုးရှိပြီး အရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို သင်ကြားပေးနိုင်မယ့် အင်တာနက် ဂျပန်ဘာသာသင်ကြားရေး ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
■ဘာကြောင့် JAFUN ကိုလုပ်ခဲ့တာလဲ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ ကျွန်မနာမည်က Mizukawa Chiyo ပါ အိုဆာကာတက္ကသိုလ် မြန်မာစာဌာနက ကျောင်းသူတစ်ဦးပါ။
・ကျွန်မအအေးမိတုန်းကဆိုရင်၊ ကျွန်မကို ဆေးဝါးကုသမှုတွေပေးတယ်။
၂၀၁၈ ကစပြီး YUFL (ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်) မှာ ကျောင်းတက်နေပါတယ်။
・ပုဂံကိုသွားဖို့ ကားနဲ့လွဲသွားတုန်းက ဆိုရင်လည်း ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီကို ကျွန်မဖုန်းဆက်ပြီး သူစိမ်းတစ်ယောက်ကပဲ ကျွန်မကို တက္ကစီနဲ့မှီအောင် လိုက်ပေးပြီး ခရီးထွက်လို့ရခဲ့တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျွန်မဘေးကလူတွေအားလုံးက ကျွန်မကို ကူညီပေးခဲ့ကြတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်မဘေးကလူတွေကိုလည်း ပြန်ပြီးပျော်စေချင်တယ်။ ပြန်ပေးဆပ်တာပေါ။ ကျွန်မမှာရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုရှိတယ်။
•ဂျပန်ဘာသာစကားကိုအသုံးချပြီး တစ်နေရာစီမှုလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ကလေးတွေ
•ဂျပန်စာကိုသင်ကြားပြီး ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ အိပ်မက်တွေရှိတဲ့ ပြည်တွင်းက ကလေးငယ်တွေ
•ဂျပန်သင်တန်းတက်ဖို့အတွက် နယ်ကနေရန်ကုန်ကို လာပြီး ငွေကြေးတွေ အချိန်တွေအများကြီး အသုံးချခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်
ဂျပန်စာကို သင်ကြားလိုစိတ်ရှိပေမယ့်၊ နေရေးထိုင်ရေးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အခက်အခဲတွေကြောင့် စာသင်ကြားဖို့
လက်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးပဲတွေ့ခဲ့ရတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြို့ပြကော ကျေးလက်ဒေသတွေမှာပါ နေထိုင်တဲ့လူတွေကို ဂျပန်ဘာသာစကား သင်ကြားဖို့
ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးချင်တယ်။ ဒီတော့ အဆင့်အတန်းမြင့်ပြီး ဈေးသက်သာတဲ့သင်တန်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကိုလည်း သင်ကြားနိုင်ဖို့က Facebook ကိုအသုံးချပြီးတော့ အင်တာနက်ကနေ ဂျပန်သင်တန်းကျောင်းဖွင့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
"အကျွမ်းတဝင်ရှိခြင်း" = နေ့စဉ်စကားပြောဆိုမှုလား၊ အခြေခံအကြောင်းအရာများ
"အရည်အချင်းများ"(ဂျပန်စာကိုသင်ကြားလိုသူ သို့မဟုတ် ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်လိုသူ) = JLPT ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ
"ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး" စီးပွားရေး = စီးပွားရေးအတွေ့အကြုံ၊ စီးပွားရေးစကားဝိုင်းများ
ယခုအချိန်မှာတော့၊ JAFUN အနေနှင့် လစဉ်ကြေး ၅,၀၀၀ ကျပ်ပေးသွင်းရသည့် အတန်းကိုစတင်ထားပါတယ်။
နေ့စဉ်ဘဝတွင် မကြာခဏအသုံးပြုသော စကားစုများ၊ ကာတွန်းရုပ်ပုံများကို အသုံးပြုပြီး သင်ကြားခြင်း၊ hiragana၊ katakana နှင့် kanji များကို လေ့လာခြင်းစသည့် ဂျပန်ဘာသာစကားနှင့် ပထမ ဦး ဆုံးအကျွမ်းတဝင်ရှိစေသော အကြောင်းအရာများကို သင်ကြားပေးပါသည်။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနှင့် JLPT ကိုဖြေဆိုနိုင်သော အင်တာနက်သင်တန်းများကို ဖွင့်ကြားပေးမည်။
•သင်ခန်းစာများကို နားလည်လွယ်ကူစေရန် ဗီဒီယိုများ ဓာတ်ပုံများ PDF များဖြင့်သင်ကြားပေးခြင်း
•ဖတ်စာအုပ်မရှိလျှင်လည်း မှတ်စုစာအုပ်မှ ဖတ်စာအုပ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။
•comment နှင့် messages များတွင် မေးခွန်းများလက်ခံဖြေကြားခြင်း
•ပုံမှန်အင်တာဗျုးများနှင့် သင်ခန်းစာများကို ခန့်ခွဲခြင်း
ပထမဆုံးအနေနှင့် JLPT N5 သင်တန်းအတွက် ရန်ပုံငွေမြှင့်တင်ချင်ပါတယ်။
နည်းပြဆရာ/လုပ်ဆောင်မှု အခကြေးငွေ ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် x လူ၂ဦး - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်
ဗီဒီယို ရိုက်ကူးခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ်
အထွေထွေပုံနှပ်ခြင်း ကုန်ကျစရိတ် ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
စုစုပေါင်း ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်
ဆုလာဒ်အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများစသည့် တစ်ခြားသူများအသုံးပြုနိုင်သော JAFUN အခမဲ့လက်မှတ်
၅၀,၀၀၀ ကျပ် လှုဒါန်းပါက JAFUN ၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ထည့်ဝင်သူ၏ Logo နှင့် မိတ်ဆက်အကြောင်းအရာကို တင်ပေးပြီး ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားမည်။
မြန်မာနိုင်ငံတစ်လွှား ဂျပန်စာသင်ကြားချင်သူများသို့ JAFUN မှ JLPT အွန်လိုင်းသင်တန်းစာပို့ချနိုင်ရေး အကြံဉာဏ်နှင့်
လိုအပ်သည့် ရန်ပုံငွေ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်ကို ထောက်ပံ့ပေးပါက အလွန်ပင်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါလိမ့်မည်။
Su See Yar
1.43L MMK Funded
大阪府出身。大阪大学ビルマ語専攻に所属する大学生です。2018年9月よりビルマ語語習得のため来緬し、ヤンゴン外国語大学でビルマ語を勉強しながら、学校外では日本語教育に励んでいました。現在、もっと多くのミャンマーの方々に日本語学習の機会をお届けしたいという想いのもと、Facebookを使った日本語学習プラットフォーム「JAFUN-Online Japanese School-」を運営しております。
ကျေးဇူးတင်ကြောင်း Email ပေးပို့ခြင်း
JAFUN အဖွဲ့ဝင်များမှ ကျေးဇူးတင်စကားပေးပို့ခြင်း
JAFUN 10,000MMK စာ service လက်မှတ်
JAFUN member မှကျေးဇူးတင်စာလွှာ
JAFUN 10,000MMK စာ service လက်မှတ်နှင့်JAFUN member မှကျေးဇူးတင်စာလွှာပေးပို့ပေးမည်
JAFUN 35,000MMKစာ service လက်မှတ်နှင့်JAFUN member မှကျေးဇူးတင်စာလွှာ
JAFUN 35,000MMKစာ service လက်မှတ်နှင့်JAFUN member မှကျေးဇူးတင်စာလွှာပေးပို့ပေးမည်
JAFUN 60,000MMKစာ service လက်မှတ်
ကျေးဇူးတင်သည့် FB post(logo နဲ့ မိတ်ဆက်စာ)
JAFUN 60,000MMKစာ service လက်မှတ်နှင့် JAFUN member ကနေကျေးဇူးတင်စာကိုပို့ဆောင်ပါမယ်။
Facebook page မှာ logo နဲ့ မိတ်ဆက်စာကိုထည့်လိုက်တဲ့ post ကိုလည်းပြုလုပ်ပေးပါမယ်။